आईबीआईएस (इनपुट / आउटपुट बफर सूचना विशिष्टता) एकीकृत सर्किट को इनपुट / आउटपुट बफर को बारे मा मोडेललिंग जानकारी प्रदान गर्न को लागि एक तरीका हो। आईबीआई मोडेलको बारेमा राम्रो कुरा यो हो कि तिनीहरू प्रायः यन्त्रहरूका लागि जहाँ निर्माताहरू बाट कुनै पनि कारण (जस्तै, जटिलता, स्वामित्व जानकारी संरक्षण, आदि) को लागि उपलब्ध छैनन् पूरा छैनन्।
आईबीआई मोडेलको सबैभन्दा लोकप्रिय प्रयोग मध्ये एउटा सिग्नल मिलान र अधिक सहित सिग्नल इक्विटी विश्लेषण छ।
TINA हाल सबै भन्दा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिएको आईबीआईएस 4.2 संस्करणलाई समर्थन गर्दछ।
TINA मा, तपाईं आईबीआई मोडेलहरू TINA मा परिवर्तित गर्न सक्नुहुन्छ Spice म्याक्रो र त्यसपछि तिनीहरूलाई TINA मा कुनै पनि सर्किटमा प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईं सरल सरलीकृत डिजिटल यन्त्र मोडेलहरू - उदाहरणका लागि, आईबीआई मोडेलको साथ MCU हरू गर्न सक्नुहुन्छ - उनीहरूको एनालॉग व्यवहारलाई अझ राम्रो वर्णन गर्न।
निम्नमा, हामी टेक्सास साधन TMS320C6748 डीएसपी र एक ADS1259 डेल्टा-सिग्मा एडीसी बीच सिग्नल अखंडता फिक्सिंग गर्ने उदाहरणको माध्यमबाट आईबीआई मोडेलको प्रयोग देखाउनेछौं।
चयन गर्नुहोस् फाइल / आयात / आईबीआई फाइल (* .ibs)चयन गर्नुहोस् c6748zce.ibs बाट < TINA निर्देशिका >\_ उदाहरणहरू \_ IBIS.
निम्न संवाद प्रदर्शित हुनेछ। यस संवादमा, तपाईं आयात गर्न मोडेल चयन गर्न सक्नुहुन्छ।
अब चयन गर्नुहोस् SPI1CLK_GP213 सिग्नल, PBFZP18LL_X50_PI_3P3 मोडेल (3.3V बिना ड्र्यागअप वा pulldown मा संचालित सेल), र प्रकार मूल्य सेट।
ठीक थिच्नुहोस्। आईबीआई मोडेल स्वचालित रूपमा एकमा रूपान्तरण गरिएको छ Spice म्याक्रो।
SPI1CLK_GP213 TMS320C6748 चिप को मास्टर कन्फिगरेसन क्रमिक घडी सिग्नल हो जुन AD AD कनवर्टर को SPI घडी इनपुट चलाउँदछ, टेक्सास उपकरण ADS1259।
चयन गर्नुहोस् फाइल / आयात / आईबीआई फाइल (* .ibs)चयन गर्नुहोस् ads1259.ibs बाट < TINA निर्देशिका >\_ उदाहरणहरू \_ IBIS.
अब चयन गर्नुहोस् SCK इनपुट सिग्नल, DIN_PD_3 मोडेल र अधिकतम मूल्य (3.3V DVDD भोल्टेज दायराको लागि)।
डीसीपी आई / ओ बफर लाई एडीसी को इनपुट लाई हानिकारक ट्रांसमिशन लाइन संग जोड्नुहोस।
डीएसपी पक्षको घडी सिग्नल सिर्जना गर्न पावर स्रोत र भोल्टेज जेनरेटर थप्नुहोस्। संकेत नोडहरूमा अनुकारको लागि भोल्टेज पिनहरू राख्नुहोस्।
हामी ट्राफिक लाइन प्यारामिटरहरूलाई चार-तह पीसीबीमा घुमाइएको केही इन्च माइक्रोकोप ट्रेसमा समायोजन गर्दछौं। यसले सीसी उत्पादन गर्दछ। 500ps विलम्ब र 90 ओम विशेषता प्रतिबाधा।
बाट फाइल <TINA निर्देशिका> \_ उदाहरणहरू \_ IBIS \_ TMS320C6748.TSC को प्रतिबन्ध मिल्दो प्रयोग गर्न तयार छ।
अब, विश्लेषण, ट्राईन्ट क्लिक गर्नुहोस्।
डीएसपी SPI घडी सिग्नल पठाउँदछ जहाँ प्रतिबाधा बेमेल प्रतिबिम्ब सिर्जना गर्दछ। परिणामले यस सर्कल सिमुलेशनमा प्रतिबाधा बेमेल द्वारा बनाईएको प्रतिबिम्ब देखाउँछ।
एडीसी साइड (पिन EoTL) मा, भोल्टेजले पृथ्वी र आपूर्ति भोल्टेज भन्दा माथि छ, जसले डिजिटल इनपुटको पूर्ण अधिकतम मूल्याङ्कन उल्लङ्घन गर्दछ।
रेखा अन्तर्गत तल र ओभरहोटहरू बचाउनको लागि आउटपुट र ट्र्रेस बीचको अवरोधमा सम्मिलित गरेर ट्रेस प्रतिबाधामा ड्राइभरको आउटपुट प्रतिबाधासँग मेल खान्छ।
आउनुहोस् अब उत्पादनमा 100 Ω रिजस्टरको आउटपुट आउटपुटको साथ।
ट्रान्जिट विश्लेषण फेरि दोहोर्याउनुहोस्, र महत्त्वपूर्ण वक्रहरू एकै साथ प्रतिलिपि गरि परिणामहरू तुलना गर्नुहोस्।
अब, हामी देख्न सक्छौं कि आईबीआई मोडेल को प्रयोग गर्न को लागी यस समस्या को हल गर्न को लागि सिमुलेशन संग महत्वपूर्ण मुद्दों को बुझन र ढूँढने को लागि।